वैशाख ९ को प्रतिक्षामा नेकपा नेता तथा समर्थकहरु - Everest Dainik - News from Nepal
वैशाख ९ को प्रतिक्षामा नेकपा नेता तथा समर्थकहरु
काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी)बीच माथिल्लो तहमा एकता टुंगिएपनि जिल्ला र मातहतका कमिटीमा एकता नहुँदा छाएको निराशा हटने प्रतिक्षामा नेता तथा कार्यकर्ता रहेका छन् ।
पार्टीले हालसम्म अध्यक्ष, सचिवालय, स्थायी कमिटि र प्रदेश कमिटि तहको एकता सम्पन्न गरेको छ ।
पोलिटब्यूरो गठन, जिल्ला र स्थानीय तह तथा जनवर्गीय संगठनबीचको एकता भने अझै बाँकी नै छ ।
नेकपाका लागि यो नै सबैभन्दा पेचिलो विषय बनेको हो ।
पार्टीका सबै तहको एकताबारे निक्र्यौलमा पुग्न पटकपटक कार्यदल बनेपनि अपेक्षित सफलता र एकमत हुन नसकेपछि पार्टी अध्यक्षद्वयले नै एकताका बाँकी कुरा पुरा गर्न छलफल अघि बढाएका हुन । यद्यपी छलफलमा पूर्व एमालेभित्रको गुटगत समस्याले नै अवरोध सिर्जना गरेको छ । आफूहरुलाई पेलेर जान खोजेको भन्दै माधव नेपाल समूहले देशव्यापी प्यानल नै सार्वजनिक गरेपछि एकता झनै अप्ठ्यारो अवस्थामा पुगेको हो ।
याे पनि पढ्नुस भोली ९ बजे एकता संयोजन समितिको बैठक बोलाए ओली र प्रचण्डले, मिल्ला त कुरो ?
यो गतिरोधलाई हटाउन अध्यक्षद्वय र अन्य शीर्ष नेताहरुबीच पटकपटक संवाद र छलफलले तीब्रता पाएसँगै सम्पूर्ण एकताको घोषणा हुन्छ भन्ने आसा कार्यकर्ताहरुमा पलाएको छ ।
नेताहरुका तर्फबाट भने आगामी वैशाख नौ गते अर्थात् लेनिन जयन्तीका दिन एकतालाई पूर्णता दिएको घोषणा हुने आशयका अभिव्यक्ति सार्वजनिक भएपछि चौतर्फी चासो समेत बढेको छ ।
तर आशंका कायमै छ– के लामो समयदेखि बल्झिएको विवाद समाधान गर्न नेतृत्व सफल होला त ? त्यसो भए त्यो सहमतिलाई सचिवालयबाट पारित गरेर स्थायी समितिबाट अनुमोदन गर्न सकिएला त ?
त्यसो त स्थायी समितिमा छलफलका लागि नलगिकन नै एकताको घोषणा गर्ने सम्भावना समेत नभएको होइन, तर यसअघि स्थायी समितिले नै कार्यदलको म्याण्डेट दिएको कारण स्थायी समितिबाट अनुमोदन गर्नुपर्ने तर्क समेत कतिपयको छ ।
याे पनि पढ्नुस नेकपा कार्यदलको बैठक सकियो, दश दिनभित्र रिपोर्ट बुझाउने
पार्टी एकताका लागि पूर्व एमालेभित्रका कतिपय समूह, उपसमूहबीचको विवाद मुख्यरुपमा जिम्मेवार भएपछि सबै पक्षलाई सन्तुलनमा ल्याएर सहमति जुटाउने मुख्य अभिभारा अध्यक्ष प्रचण्डको काँधमा आइपरेको छ । प्रचण्डका लागि भने सरकारलाई सफल पार्न र ऐतिहासिक उपलब्धिहरु जोगाउन तलदेखि माथिसम्म पार्टी एकता पहिलो प्राथमिकता बनेको देखिन्छ । पार्टी सबल र सुदृढ नभएसम्म चुनावमा व्यक्त गरिएको घोषणा पुरा गर्न नसकिने निष्कर्श उनले कतिपयबेला अभिव्यक्त समेत गरेका छन् ।
त्यसो भए वैशाख नौ मा केही नयाँ उत्साह सिर्जना होला त ? आशंका निकै जन्मेको छ । समय थोरै भएको र अहिलेसम्म सहमतिको प्रारम्भिक प्रारुप समेत सार्वजनिक नभएको अवस्थामा एकाएक सबै कुरा मिल्ने अवस्था भने देखिँदैन । बरु जिल्ला नेतृत्वको बारेमा मोटामोटी सहमति गर्ने, जिल्ला अध्यक्ष र सचिवबाहेक अन्य पदाधिकारी र स्थानीय तहको निर्णय गर्ने जिम्मा प्रदेशलाई दिने, यसैगरी जनवर्गीय संगठनको हकमा अध्यक्ष र महासचिव केन्द्रले निर्धारण गरी बाँकी काम फ्रयाक्सन इन्चार्जमार्फत या कार्यदल बनाएर सम्पन्न गर्ने अवस्थामा भने सहमति हुने ठाउँ नभएको होइन ।
लेनिन जयन्तीको अवसरमा एकता हुन सकेन भने यसको प्रत्यक्ष प्रभाव पार्टीको छवि र सरकारमा पर्ने कतिपयको आँकलन छ । अहिले एकता नहुँदा पार्टी चलायमान बन्न नसक्नु र सरकारले समेत आफ्नो लोकप्रियता बढाउन नसक्ने अवस्था देखिएको छ । यो अवसरमा समेत एकता भएन भने यसले पार्टी र सरकार दुबैलाई नकारात्मक असर पर्ने नै देखिन्छ । त्यसैले कतिपय असहमतिका वावजूद पनि एकताको एउटा खाकामा सहमत हुनैपर्ने दबाब शीर्ष नेतृत्व र नेताहरुमा रहेको देखिन्छ ।
ट्याग्स: nekapa, Party Unity